Vagadziri vekurapa - China Medical Fekitori & Vatengesi
Chiremba kushungurudzika kwekutungamira gwara chubhu
✭ Kambani yedu ine ruzivo kwazvo mumunda wepurasitiki mafuru ezvekurapa catheters. Kwete kungoita kugadzira chete, asiwo zvekurapa-giredhi jekiseni kuumbwa. Iyo epurasitiki zvinhu zvinoshandiswa mune ino yekurapa catheter inodhura kwazvo uye inoda zvemhando yepamusoro mhando. Buri remukati wechigadzirwa iri 1.27mm chete dhayamita. Yedu chakuvhuvhu inoisa inoitwa ye SKH51 yemhando yepamusoro zvinhu. Ichi chishandiso chinogona kuona kushivirira kwemakomba madiki uye kuve nechokwadi chehupenyu hwebasa hweinoisa pini.
✭ Iyo epurasitiki zvinhu zveiyi catheter ndeye 65-degree nyoro zvinhu. Panguva jekiseni Kuumbwa kwacho, zvakaoma demold. Kuburikidza nekuvandudzwa kwedu kwetekinoroji, yedu yazvino kugadzirwa kweforoma kwakatsetseka uye jekiseni kutenderera kwakapfupiswa. Parizvino, yedu jekiseni Kuumbwa kutenderera ndeye 16 masekondi, iyo inoponesa nguva yekuendesa uye mutengo kune vatengi vedu.
✭ Yedu seti yevhu inoumbwa neS136 yakaoma zvinhu, uye hupenyu hweforoma hunofanira kusvika miriyoni imwe nguva. Mune jekiseni kuumbwa kwekugadzira maitiro, zvinodikanwa kuti uve nechokwadi cheichi chigadzirwa, uye uve nechokwadi chekuti chakatsiga uye chakasimba panguva yegungano maitiro.
7day epurasitiki piritsi bhokisi
✭ Mazuva manomwe * 7 ekuchengetera mapiritsi bhokisi makumi mana-manyoro-chiratidzo mabhokisi emimwe mishonga anogona kuzadzisa zvizere zvaunoda zvezuva nezuva kunyangwe uchifamba.Iwo marara muraraungu zuva rega rega anoiswa mucherechedzo zvakasiyana pachivharo kuti iwe ugone kusiyanisa zviri nyore zvaunoda.Iyo yakasimba uye yakasimba chikafu-giredhi repurasitiki muvharo inogara yakasimba chero bedzi iwe ukaivhara uye isisina pop-yakavhurika. Iko hakuna mushonga wakapararira munjodzi kana kukanganisa.Iyo yakasarudzika cylindrical chitarisiko dhizaini inochengetedza nzvimbo, kusiyana nemamwe akaenzana emakona chikamu mapiritsi mabhokisi, ayo anogona kubata zvimwe zvidiki midziyo.
✭ Semuenzaniso, Piritsi CUTTER.Kukura 22.5 x 6 X 27 cm Bhokisi rega rega rinoyera 1.06 inches * 0.23 inches * 0.86 cm, rakakura zvakakwana pamasikisi akasiyana
Iyi epurasitiki chikamu chikamu cheMafuta mafirita epurasitiki maccessories kubva kuUSA mutengi. Iyi seti yevhu inotora iyo DME standard. Iyo Core zvinhu ndeye S136 yakaoma simbi.
✭ Chimiro chichiumbwa chiri nyore, iine mbiri Becu yepakati inoisa zvivakwa. Icho chigadzirwa chigadzirwa ndeye PP, uye iyo yepamusoro inoda kuve yechiPolish- # 600. Chigadzirwa size kunyatso kudikanwa chinodiwa +/- 0.1. Iyo nguva yekuendesa ndiyo mazuva makumi matatu nemashanu, uye iyo jekiseni kutenderera ndeye makumi matatu neshanu. Iyo fomu yakaedzwa kaviri chete, uye mutengi akatikumbira kuronga kutumira kunze kuUSA jekiseni kuumbwa fekitori.
✭ Kana uchigadzira jekiseni-rakaumbwa zvikamu kubva mumapurasitiki, iyo tembiricha tembiricha ine yakakosha pesvedzero pahunhu hwezvikamu uye iyo nguva yekutenderera. Optimum tembiricha yekudzivirira panguva yekugadziriswa kwethermoplastics saka zvakare ine simba rakanangana nekugona kwekugadzirwa.
✭ Iyo jekiseni muforoma inodziya inopisa neyakajowa zvinhu. Iko kupisa kunoparadzaniswa neyakaipisa conduction mune izvo zvinhu uye musimbi yesimbi kune iyo pamusoro peiyo tembiricha yekudzora chiteshi, uko kupisa kunopihwa kubva kuburikidza nekupisa kupisa kune ino tenderera kupisa kupisa svikiro (mvura kana mafuta). Iyo tembiricha yekudzora yuniti inodonhedza kupisa kweiyo kupisa yekuchinjisa svikiro uye inodzosera iyo yakatonhora svikiro kune kutenderera.
✭ Yedu seti yevhu inoumbwa neS136 yakaoma zvinhu, uye hupenyu hweforoma hunofanira kusvika miriyoni imwe nguva. Mune jekiseni kuumbwa kwekugadzira maitiro, zvinodikanwa kuti uve nechokwadi cheichi chigadzirwa, uye uve nechokwadi chekuti chakatsiga uye chakasimba panguva yegungano maitiro. Ita chikamu chedu chemagetsi kuti chigadzikane.